Kushungurudzwa neKukundwa Kwakanyanya kweGoogle Wave | Martech Zone
Kushungurudzwa neZvinokuvadza Zvimiro zveGoogle Wave
China, January 7, 2010 China, June 18, 2015 Adam Mudiki
Ndanga kushandisa Google Wave ikozvino kwemwedzi yakati wandei. Pandakatanga kunzwa nezveWave, ndakafunga kuti zvinoita senge zvingave zvinonakidza. Ini ndakabva ndatarisa iyo vhidhiyo yakareba kwazvo nezve chishandiso uye akaremerwa nesimba uye kugona kwezvakaratidzika kunge shanduko yakamirira mukutaurirana kwepamhepo.
Mushure mekukumbira kukokwa uye pakupedzisira kuwana mukana kusevhisi ini zvishoma nezvishoma ndakatanga kutora kubatana kune dzimwe shamwari nevamwe vandaishanda navo zvakare vaive nekwaniso yeku Google Wave. Kune chishandiso chekutaurirana, zvinoita kuti zvisanyanya kubatsira kana iwe usingakwanise kutaura nevanhu vaunogara uchitaurirana navo zvakadaro zuva nezuva.
Google Wave anovimbisa kupa mikana yekuronga zviitiko, kugovana kutaurirana uye zvinyorwa zvakaenzana zvakagoverwa. Iwe unogona kugovana mafoto, mazano, mavhidhiyo, zvinyorwa, zvinyorwa, uye kunyange mitambo zvese papuratifomu imwechete mukati meiyo iripo browser yewindo.
Chokwadi ndechekuti ini handisati ndamboona shanduko chaiyo mukutaurirana kwangu. Iko kushandiswa kwakanyanya kwandakaona kubva Google Wave iko kubatana kwandakaita neshamwari yangu iri kunyorera rimwe remablog angu. Isu tinogovana zvinangwa, mazano, mibvunzo uye marongero nemumwe kune mumwe muWave uye inoshanda nemazvo.
Ndichiri kuchimirira kuti chibvise chaizvo hazvo. Ini ndinofunga nzira yavaigona kuisa iko kushandisa mukunyanyisa ichave yekuda kutsiva yaivapo Gmail mashandiro ane Google Wave. Ah, uye pavanenge vari pazviri, ingo sanganisira Google Zvinyorwa uye Google Taura imomo zvakare. Pamwe kunyangwe kusasa kwe Google Mapoka kutakura pamusoro zvakare.
Ndichiri kufunga Google Wave ichagadzirisa kutaurirana kwepamhepo. Ini handifunge kuti zvichaitika kudzamara yakawedzera mushandisi base inokwanisa kukwira papuratifomu nezvimwe Google masevhisi anogona kuverengerwa kana kubviswa.
Tags: google wavesGoogle +
Maitiro Ekufambisa Bhurogi Rako uye Chengetedza Kutsvaga Momentum
Haasi Ese maProfessional SEO Akasikwa Akaenzana
Jan 7, 2010 pa 11: 47 AM
Jason, iwe uchangobva kupfupisa mundima shoma shoma, chaizvo izvo zvandakanzwa nezveGoogle Wave. Ndaida chaizvo kuti ishandure zvachose mashandiro angu, asi ndakasara ndichinzwa kuremerwa.
Jan 7, 2010 na8:09 PM
Jason, yakanaka post! Kufumura vateereri pano kune yechokwadi tekinoroji uye mashandisiro eblogger eWave kwakange kwakarebesa. Ndatenda!
Jan 7, 2010 na9:59 PM
Jason, handina kukwanisa kubvuma zvimwe.